Kenya:- Garsoore Cabdiqawi Hore Ayuu Soomaaliya Umateley Mana Yeelayno | Gaaroodi News
Kenya:- Garsoore Cabdiqawi Hore Ayuu Soomaaliya Umateley Mana Yeelayno
March 19, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Garsoorayaasha maxkamada ICJ
Dowladda Kenya ayaa mar kale sharaxaad ka bixisay sababta ay u diiday ka qeyb galka kiiska muranka badda ee Soomaaliya kala dhaxeya.
Bayaan ay soo sartay wasaarada arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay u aragto in maxkamada aysan ahayn mid si xaq ah u qaadaysa kiiska muranka badda.
Go’aankan ayay Kenya sheegtay in ay gaartay ka dib wadatashi ballaaran oo ku saabsanaa qaabka ugu wanaagsan ee loo difaaci karo madaxbanaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya .
Bayaanka ka soo baxay wasaarada arrimaha dibadda ee Kenya aya sidoo kale lagu xusay in Kenya ay gaartay go’aanka ah in aysan dhageysiga ka qeyb galin islamarkana ay wali rumaysan tahay in kiiskan maxkamadda laga soo celiyo laguna xaliyo wadaxaajood labada dhinac ay yeeshaan.
Dowladda Kenya ayaa dhanka kale sheegtay in maxkamadda ay ku wargalisay in uu jiro dhinac saddaxaad oo leh dano ganacsi oo kiiska arrintan sii horinaya taasi oo ay sheegtay in xasiloonida gobolka ay halis galinayso
“Sida dedeg ah ee loogula cararay kiiska maxkamad iyo dhinacyada ku lugta leh kiiskan ayaa cadeynaysa in uu jiro qorsho si wayn looga baaraandagay taasi oo madaxa la isugu galinayo labada dal iyada oo aan la eegin xaaladda ammaan ee gobolka”, ayaa lagu sheegay bayaanka.
“Dhinac saddaxaad oo galangal leh ayaa doonaya in iyaga oo isticmaalaya xasilooni daridda Soomaaliya ay ku hormariyan danahooda ganacsi iyaga oo aan eegayn nabada iyo xasiloonida gobolka “, ayaa intaa lagu daray.
Dowoladda Kenya ayaa mar kale ku celisay shakiga ay ka qabto garsoore Cabdulqawi Yuusuf oo u dhashay dalka Soomaaliya islamarkana qeyb ka ah garsoorayaasha maxkamada ICJ ee kiiska qaadaya.
Bayaanka ka soo baxay wasaarada arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu sheegay in garsoore Cabdulqawi maadaama uu u dhashay Soomaaliya ay sii xoojisay walaaca ay ka qabaan in kiiska uusan si xaq ah u dhicin.
Dowoladda Kenya waxay dhanka kale ku dooday in garsoore Cabdulqawi uu horey Soomaaliya ugu matalay shirkii caalamiga ahaa ee Qaramada Midoobey ee looga hadlayay arrimaha shuruucda badda.
Bayaanka ay soo saartay dowladda Kenya ayaa sidoo kale feyriska Corona sabab uga dhigtay in aysan ka qeyb galin dhageysiga dacwada maxkamada ICJ.
Kenya ayaa ku dooday in ay qareenadii cusbaa ee ay qoratay aysan u suuragalin in ay kulmaan sababo la xiriira feyriska Corona.
Dhageysiga kiiska muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay maalintii shalay ahayd.
Qareenadii ka socday Soomaaliya ayaa doodooda iyo cadeymahooda u gudbiyay golaha garsoorayaasha maxkamada ICJ.
Balse dowladda Kenya ayaan ka qeyb galin dhageysiga kiiska muranka badda ee yaalla maxkamadda ICJ